Isupermap-isisombululo esibanzi se-2D kunye ne-3D GIS-Geofumadas
Epreli, 2019 Geospatial - GIS, Ukuprinta kokuqala
I-Supermap GIS ngumboneleli ngenkonzo ekudala emile onerekhodi yomkhondo ukusukela oko yaqalwa kuluhlu olubanzi lwezisombululo kwimeko ye-geospatial. Yasekwa ngo-1997 liqela leengcali kunye nabaphandi ngenkxaso ye-Chinese Academy of Sciences, isiseko sayo semisebenzi sise-Beijing-China, kwaye kunokuthiwa ukukhula kwayo kuye kwaqhubela phambili e-Asiya, kodwa Ukusukela ngo-2015 ibineqonga elinomdla lokwandisa umbulelo kukuyila kwayo kubuchwephesha beqonga lobuchwephesha be-GIS, i-GIS kwilifu, isizukulwana esilandelayo se-3D GIS, kunye ne-GIS yomthengi.
Kwindawo yayo kwiveki ye-FIG eHanoi, besinethuba lokuthetha ngezinto ezahlukeneyo ezenziwa yile software, engaziwayo kwimeko enkulu yasentshona. Emva konxibelelwano oluninzi, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibhale inqaku malunga nento endibethele yona kakhulu ngeSupermap GIS.
I-SuperMap ye-GIS, iqulethwe uchungechunge lobuchwepheshe obuphambili -maqonga-ebandakanya ukuqhubekeka kwedatha yendawo kunye nezixhobo zolawulo. Ukusukela ngo-2017, abasebenzisi bakwazile ukonwabela uhlaziyo lwayo, iSupermap GIS 8C, nangona kunjalo, le SuperMap 2019D ka-9 yakhutshwa eluntwini, enenkqubo ezine zetekhnoloji: I-GIS efini, i-GIS edityanisiweyo, i-3D GIS kunye neBigData CHALK.
Ukuqonda kakuhle ukuba kutheni kuthathwa njengesisombululo esibalulekileyo, kufuneka wazi indlela iimveliso zakho ezidibene ngayo, oko kukuthi, yiyiphi into enikezela ngayo.
I-GIS yamaqela amaninzi iyenza: iDesktop, icandelo leGIS, kunye neGIS Mobile. Eyokuqala yale idesktop sele ikhankanyiwe, iphuhliswa ngokusekwe kwi-plug-ins-kugqitywa- iyahambisana CPU ezahlukeneyo, ezifana ARM, IBM Power okanye x86, kwaye isebenza ngendlela eyiyo na bume yokusebenza efakwe yi Windows, Linux, kwaye ihlanganise iimpawu 2D kunye 3D.
Naluphi na uhlobo lomsebenzisi, umntu ngamnye, ishishini okanye urhulumente, angasebenzisa le sicelo sedesktop, kuba kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye iyilwe ngohlobo lwesicelo seMicrosoft Office. Kule sicelo, kukho zonke izixhobo ezibonakalayo ngokubanzi kwi-GIS yedesktop yokulayisha idatha kunye nokubonisa, ukwakhiwa kweziko, okanye iinkqubo zokuhlalutya, ezongezwa ukufikelela kwiinkonzo zeemephu zewebhu, ukukhuthaza intsebenziswano phakathi kwabasebenzisi. Phakathi kweempawu zayo zokusebenza, oku kulandelayo kubonakala: ulawulo kunye nokuboniswa kwemifanekiso ye-photogrammetric, i-BIM, kunye namafu ekhomba.
Kwimeko ye-GISMobile, inokusebenza kwindawo ye-iOS okanye ye-Android, kwaye inokusetyenziswa ngaphandle kweintanethi kuzo zombini idatha ze-2D kunye ne-3D. Izicelo ezibonelelwa yiSupermap Mobile (iSuperMap Flex Mobile kunye neSupermap iMobile), zibandakanya uphando lwentsimi, ezolimo ezichanekileyo, ezothutho ezikrelekrele okanye ukuhlolwa kwamaziko, ezinye zezi zinokuzenzelwa ngumsebenzisi.
Enye yeendlela ezingaphephekiyo nezingenakuguqulwa kulawulo lwedatha yendawo. Liqonga eliqhagamshelwe kwiziphelo ezininzi ze-GIS ukuze umsebenzisi / umthengi akwazi ukwakha iimveliso ngendlela efanelekileyo nezinzileyo. Yenziwe yiSuperMap iServer, iSuperMap iManager kunye neSuperMap iPortal, ezichazwe apha ngezantsi.
iServer SuperMap: Kuyinto kwiqonga-komsebenzi apho unako ukwenza imisebenzi efana nolawulo kunye kudweliswe iinkonzo 2D kunye 3D, ukongeza ekunikeni izixhobo ukuphuhlisa izandiso. NgeServer SuperMap, unako ukufikelela kwiinkcukacha zeenqwelwazi zedata, ukubonakaliswa kwexesha langempela okanye ukwakhiwa kwezicelo zeDig Data Data.
SuperMap iPortal: i-portal edibeneyo yokulawulwa kwezixhobo ze-GIS ezabelwana ngazo - ukukhangela nokulayishwa-, ukubhaliswa kwenkonzo, ukulawula ukufikelela kwemithombo emininzi, ukongezwa kwetheknoloji ekudalweni kweemephu zewebhu.
Supermap iExpress: Yakhelwe ukuphucula amava okufikelela kumsebenzisi kwii-terminals, ngeenkonzo ze-proxy kunye nobuchwepheshe bokukhawulezisa ukugcina. Nge-I -xpress kunokwenzeka ukwakha ixabiso eliphantsi, inkqubo yesicelo se-WebGIS yenkqubo yamaninzi. Ukongeza, ivumela ukupapashwa ngokukhawuleza kweemveliso, ezifana ne-2D kunye ne-3D.
SuperMap iManager: esetyenziselwa ulawulo kunye nokugcinwa kweenkonzo, izicelo kunye nemiqulu emikhulu yedatha. Ixhasa isisombululo seDocker - iteknoloji yeconta - ukuphumeza ukusekwa ngokufanelekileyo kweGIS efini, nokudala iBad Data, oku kuvumela ukusebenza okuphezulu kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwezibonelelo. Ilungelelanisa kwiiplatifti ezininzi kwifu, kwaye ivelise izixhobo zokubeka iliso.
IDaMap iDataInsight: ivumela ukufikelela kwedatha ye-geospatial, ukusuka kwikhompyutha-yangaphakathi-kwaye kwiwebhu, iqinisekisa ukuba umsebenzisi unokubonakala ngokubonakalayo kwedata, ngenxa yokukhishwa kwayo emva koko. Inenkxaso yokulayisha idatha kwiipredishithi, iinkonzo zewebhu kwifu, iifayile ezicebileyo.
SuperMap Online: Le mveliso yenza into abaninzi abayifumana ilungile, irenta kwaye ibamba idatha ye-GIS kwi-intanethi. ISuperMap ekwi-Intanethi ibonelela umsebenzisi ngokusingathwa kwe-GIS kwilifu ukuze bakwazi ukwakha iiseva zikawonke-wonke ze-GIS, apho banokubamba khona, bakhe kwaye babelane ngedatha yendawo. ISuperMap ekwi-Intanethi, iyafana nento ebonelelwa yi-ArcGIS ekwi-Intanethi, ukusebenza kuyadibana apho: iinkqubo zohlalutyo (i-buffers, i-interpolations, ukukhutshwa kolwazi, ukulungelelanisa uguquko okanye ukubala kwendlela kunye nokuhamba), ukulayishwa kwedatha ye-3D, ukupapashwa kunye neendlela zokwabelana idatha ekwi-Intanethi, iintlobo ngeentlobo zee-SDK zabathengi, ukufikelela kwidatha yemixholo.
Iimveliso zeSuperMap zidibanise ulawulo lweedatha lwe-2D kunye ne-3D, kunye nokusebenza kwayo kunye nezixhobo ezinokwenzeka: ukumodareyitha kwe-BIM, ulawulo lweenkcukacha ze-oblique photogrammetric, ukumodeliswa kwedatha evela kwizikena ze-laser (point point), ukusetyenziswa kwezinto zevector okanye I-2D raster enobude kunye nedatha yokuthungwa eyongezwe ukwenza izinto ze-3D.
I-SuperMap, yenze iinzame zokumisa idatha ye-3D, kwaye oku kunokwenzeka ukudibanisa kunye nokongeza iitekhnoloji ezinje nge: inyani yenyani (VR), iWebGL, inyani eyongeziweyo (AR), kunye noshicilelo lwe-3D. Ixhasa idatha yevektha (inqaku, ipoligoni, umgca) kunye nezinto zombhalo (izichazi zeCAD), ifunda ngokuthe ngqo idatha yeREDIT kunye neBentley, iimodeli zokuphakama kwedijithali kunye nedatha yeGRID Unokuvelisa ngayo idatha yolwakhiwo yemessage ebunjiweyo, ukusebenza nge-voxel rasters, ixhasa ukubala kobungakanani okanye ukongeza iziphumo kwizinto.
Ezinye zezicelo kwi-3D SuperMap imvelo zi:
Ukusetyenziswa kwesimangcilo sokucwangcisa: ukwakha icebo locwangciso ngokufezekisa ukuhlunga okuphakamileyo kunye nokukhanyiswa kwemvelo kweendawo zendawo yangempela.
Ukucwangciswa kocwangciso lwendawo: ngokwemimandla kunye neempawu ze-3D, imodeli yenza izinto ezifana nezendlela.
Ukubonisana kwe-3D: kunokwenzeka ukubeka iliso kwimithombo yemvelo kunye ne-estate, ukuchonga indawo yabo kunye nokwenza izicwangciso zokukhusela.
I-BIG DATA DIS
Ngobuchwephesha beSuperMap, ukubonwa, ukugcinwa, ukuqhubekekiswa kwedatha, uhlalutyo lomhlaba kunye neenkqubo zokuhambisa idatha zinokwenziwa ngexesha lokwenyani, oku kuyindlela entsha kwicandelo le-GIS + Big Data. Inika iSuperMap iObjects zeSpark, iqonga lophuhliso lwecandelo le-GIS, elinika umsebenzisi ubuchule be-GIS obuyimfuneko ekusingatheni idatha eNkulu. Kwelinye icala, kunokukhankanywa ukuba ibonelela ngokusebenza okuphezulu kwetekhnoloji yokumela ngenkxaso yokuguqulwa kwesitayile semephu, uhlaziyo kunye nokumelwa kwexesha lokwenyani, amathala eencwadi avulekileyo kunye nobuchwephesha bokubonisa idatha enkulu. (sichitha iidayagramu, ii-thermograms, iimephu zegridi, okanye iimephu zendlela.
Imisebenzi esele ikhankanyiwe isetyenziselwa ukuphucula ukuqonda imeko-bume, ethi iguqulele kuphuhliso nasekwenzeni izigqibo kwizihloko ezinje nge: Smart City, iiNkonzo zikaRhulumente, uLawulo lweeDolophu kunye nezixhobo zendalo. Izifundo zetyala zibonisiwe, apho basebenzise khona iSuperMap kunye neetekhnoloji zayo, phakathi kwazo ezinokuthi zikhankanywe: Inkqubo yolawulo lwedolophu yeSithili saseChogwen -Beijing, isikhokelo sendawo yokuma kwedolophu yedijithali esekwe kwilifu. , Japan Disaster Geoportal, INkqubo yoLwazi yeZibonelelo zoLoliwe zaseJapan ezinkulu ezisekwe kwiSuperMap, kunye neQonga lokuQikelela ngembalela.
Ukuba sithatha enye yezi zinto zingasentla, umzekelo: Inkqubo yolwazi kwizibonelelo zikaloliwe ezikhulu eJapan esekwe kwiSuperMap, kufuneka ichazwe ukuba iSuperMap Gis, ilawula onke amaziko kaloliwe eJapan, ke umthamo weenkcukacha ibanzi kakhulu kwaye inzima, ukongeza ekufuneni iqonga elihlangabezana nomgangatho olindelweyo kunye neemfuno zonxibelelwano.
ISuperMap iphumeze inkonzo ye-Intanethi kunye neIntranet, kunye nemodeli yolawulo lwedatha enezinto zeSuperMap, apho imibuzo yolwazi lomhlaba, uhlaziyo lweenkcukacha-manani, ukuhlaziywa kwendawo (ukubekwa kweelebheli kunye neempawu), ukukopa imephu, uhlalutyo izixhobo zokuyila, ukuyila nokuprinta; konke oku ngokusebenzisa umboniseli wolwazi othile-owakhelwe kwi-SuperMap-, kuphela kwidatha eveliswe yile nkampani, ekulindelwe liqela le-JR East Japan elilawula inkqubo kaloliwe.
Kuyathakazelisa kwesi sixazululo, ukulungelelaniswa kokusetyenziswa kwayo, umgca opheleleyo weemveliso, ukuhlanganiswa kwemveliso yayo, ukuphunyezwa ngokuzinzileyo kwemisebenzi yayo kunye nokusetyenziswa kakuhle kwinto enokuthi ibe yinto efanelekileyo yeenkampani ezijoliswe kwiziphumo. Iimveliso abazinikelayo azijoliswanga kuphela kwiijographers okanye i-geomatics, kodwa baye bathatyathwa kumaziko karhulumente kunye nezoshishino, ngubani, ngokusebenzisa ukusetyenziswa kwalo, angenza izigqibo zilungelelaniswe nezinto ezikhoyo.
Bentley Systems BIM umbono yam yokuqala
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ukujongwa kwamaxesha-Iplagi yokufikelela kwimifanekiso yesatellite eneembali nge-AutoCAD
Post Next Isicelo sokuskena se-laser ye-3D sinqoba i-IF DESIGNOkulandelayo »